Pamhepo SEO Zvishandiso zveLinks, Mazwi Akakosha uye Chinzvimbo Chekutevera
Isu tinogara takatsvaga zvishandiso zvikuru uye ne $ 5 bhizimusi indasitiri, SEO ndeimwe musika ine toni yezvishandiso kukubatsira iwe. Kunyangwe iwe urikutsvaga iwe kana vako vanokwikwidza 'backlinks, kuyedza kuona mazwi akakosha uye cocurrence mazwi, kana kungoedza kuongorora kuti yako saiti irikumisikidzwa, heino anozivikanwa zvakanyanya maturusi eSEO uye mapuratifomu pamusika.
Zvidimbu Zvakakosha zveKutsvaga Injini Kugonesa Maturu uye Ekutevera Mapuratifomu
Audits - Kuongorora kweSEO kunokamba saiti yako uye kukuzivisa iwe nezvenyaya dzinogona kukanganisa masosi ako.
Backlink Kuongorora - kana yako saiti yakabatana kune saiti ine yakashata yekutsvaga injini chiremera, unogona kuva nenguva inotyisa chinzvimbo. Kugona kuongorora vhoriyamu uye mhando yezvinongedzo zviri kunongedzera kumatunhu ako zvakakosha kumatambudziko epamberi ezvekugadzirisa zvinhu uye kukwikwidza kuongorora.
Kukwikwidza Kutsvagisa - kugona kupinda kana kutsvaga vakwikwidzi vako, masosi avo, uye chii chinosiyanisa yavo domaini uye mapeji kubva kune ako kuitira kuti ugone kuona maburi ekuzadza.
Data Mining - Zvinoshamisa kushayikwa kubva kune akawanda emapuratifomu aya kugona kuisa, kuisa mumapoka, kuunganidza, yangu data, uye kugadzira mishumo pamatanho akakura kwazvo emazwi.
Keyword Discovery - nepo mazhinji emapuratifomu ekutarisa achikupa iwe nematanho chaiwo, haatenderi iwe kuti uwane kuti ndeapi mazwi akakosha aungave uchiisa pane iwo ausingazive.
Keyword Kubatanidza - kutarisa mashoma mazwi akakosha kunogona kusapa seyakarurama pikicha sekubatanidza zvakafanana kiyi musanganiswa uye kuzivisa nezvekuti uri kuita zvakadii pamusoro wenyaya. Keyword grouping chinhu chikuru cheSEO chinzvimbo chekutarisa maturusi.
Keyword Research - kunzwisisa kiyi yakakosha inoenderana nezvigadzirwa uye masevhisi aunopa akakosha kune ako emukati kushambadzira ekuedza. Keyword ekutsvagisa maturusi anowanzo kupa co-kuitika mazwi akakosha, musanganiswa-ane chekuita akakosha mazwi musanganiswa, murefu-muswe kiyi musanganiswa musanganiswa, uye kukwikwidza kwezwi rakakosha (kuti usatambise nguva yako kuyedza kurengerana pane izvo zvausingamire mukana kuwana traction on.
Keyword Chinzvimbo Kuongorora - kugona kuisa mazwi akakosha uyezve kutarisa chinzvimbo chavo nekufamba kwenguva ndicho chinhu chakakosha chemazhinji emapuratifomu. Tichifunga kuti mhedzisiro yekutsvaga yakanyanya kuve yakasarudzika, kugona uku kunonyanya kushandiswa pakuferefetwa kwese kuti uone kana kuedza kwauri kuita kuri kuvandudza chinzvimbo chako pane mazwi akakosha kana kwete.
Yemunharaunda Keyword Chinzvimbo Kuongorora - sezvo nzvimbo yemushandisi wekutsvaga uye bhizinesi rako rinogona kutamba rakakura basa, mazhinji emakiyi ekuongorora mapuratifomu anopa nzira yekutevera yako chinzvimbo nenzvimbo yenzvimbo.
Kukwesha & Kuongorora Kwemukati - Zvishandiso zvinoongorora yako saiti hierarchy, kuvaka peji, kumhanyisa peji, uye zvimwe zvinobatana nyaya zvinonakidza kugadzirisa nyaya dzingave dzisina kujeka asi dzinogona kunge dzichikukonzera matambudziko mazhinji kana uchinge waiswa.
Mugove wezwi - kukwikwidzana kwehungwaru mishumo iyo inopa yako brand neinowani yekutevera nzira yekuratidza yako chikamu chekutsvaga uye pasocial hurukuro online ca kukuratidza iwe kana iwe uri kugadzira musoro Mushure mezvose, unogona kunge uri kuwedzera kutsvaga kwako kuoneka, asi pamwe mukwikwidzi wako ari kuita rakatonaka basa.
Kufurirwa - Zviri zvechisikigo chete kuti iko kukwezva kwaunokwezva pasocial media chiratidzo chikuru chesimba rawakavaka nemainjini ekutsvaga. Nyowani SEO mapuratifomu ari kupa ruzivo mune kuwirirana pakati pekutsvaga uye zvemagariro uye kuri kubhadhara!
Ongororo yeYouTube - inowanzo kufuratirwa, Youtube ndiyo # 2 injini yekutsvaga munyika sezvo mabhizinesi mazhinji uye vatengi vachitsvaga misoro vachitsvaga tsananguro yevhidhiyo, zvigadzirwa zvemhando, uye sei-kune.
Chinyorwa cheKutsvaga Injini Webmaster Zvishandiso
Bing Webmaster Tools - gadziridza mashandiro ako saiti mukutsvaga. Wana mukana wemahara mishumo, zvishandiso uye zviwanikwa.
Zvishandisi zvemasimiti eGoogle - inokupa iwe nemishumo yakadzama nezvekuonekwa kwemapeji ako paGoogle.
Chinyorwa cheSEO Zvishandiso zveLinks, Mazwi Akakosha uye Rank Yekutevera
AccuRanker - Gadzirisa maitiro ekutarisa kumusoro kuti ako akakosha mazwi kuGoogle uye Bing enjini dzekutsvaga neup-to-ye-yechipiri inogadziridza.
Yepamberi Webhu saiti - Nyowani masosi ezuva nezuva, vhiki nevhiki uye pane zvinodiwa. Zve desktop, nhare nekutsvaga kwenzvimbo. Yakarongedzwa zvakanaka mumuchena chitupa mishumo. Inowanikwa kubva chero chinhu.
Ahrefs Site Explorer - Iyo hombe uye irinyore index yehupenyu zvinongedzo. Index inovandudzwa maminetsi gumi neshanu.
AuthorityLabs - Shandisa yedu yekutsvaga injini chinzvimbo uye keyword dhata kuti iite yako SEO yekutarisa, tarisa yemuno uye nharembozha masosi, uye uwane asina-akapihwa mazwi akakosha.
BrightEdge SEO ndiyo yekutanga SEO chikuva chekuburitsa yakaratidza ROI - ichigonesa vashambadziri kuwedzera mari kubva ku organic kutsvaga munzira inogona kuyerwa uye inofungidzirwa.
Yekuziva SEO Yakasarudzika SEO maficha ayo anowedzera yako yekubatanidza kuongorora uye yekubatanidza yekuvaka mhedzisiro.
Colibri inokupa ruzivo rwekuti ungawana sei traffic yakawanda uye vatengi kubva kuSEO.
Kondakita Kutsvaga mwenje ndiyo inonyanya kushandiswa SEO chikuva - ichipa simba vashambadzi vatengesi kutora kutonga kwavo kwekuita kwekuita.
Cuutio Inbound Kushambadzira Platform - Ziva nzvimbo dzako chaidzo uye makwikwi mamiriro paGoogle, chengeta mhedzisiro yemhedzisiro ye
search engine optimization uye ongorora mashandiro ese eako akakosha mazwi
Dhiragoni Metrics inopa iyo ongororo uye manzwisisiro aunoda kuti uve pamusoro pevanokwikwidza uye shandura kumhan'arira kwemwedzi kune mhepo.
Ongorora Mazwi Akakosha iri yemahara kiyi yekutsvagisa chishandiso inosanganisira yakakosha kiyi vhoriyamu checker, kiyi kiyi jenareta, kubvunza keywords jenareta, uye Youtube keyword jenareta.
Ginzametrics inogadzira bhizinesi SEO yakapusa uye ndiyo chete chikuva chekubatsira vashambadziri nenzira inobudirira kuita traffic kubva ku organic search.
gShift's SEO software system inosimbisa yako SEO data yevatengi (chinzvimbo, backlinks, masocial sign, kukwikwidza njere, Google Analytics uye keyword research) uye inopa otomatiki, yakarongwa, chena-yakanyorwa SEO meseji ichisiya yakawanda nguva yeboka rako rebasa kuita SEO mabasa ayo gadziridza kuvapo kwevatengi vako.
Linkody - nyore-kushandisa uye inokwanisika backlink tracker
Majestic SEO - Batanidza zvishandiso zvehungwaru zveSEO neInternet PR uye Kushambadzira. Site Explorer inoratidza inbound chinongedzo uye saiti pfupiso data.
Meta Forensics - Meta Forensics ndeyekuvakwa kwewebhu webhusaiti, yemukati yekubatanidza kuongorora uye SEO chishandiso chinobatsira kuona asingaonekwe matambudziko ewebhusaiti angave ari kukanganisa vashanyi vako, vanotsvaga injini dzekutsvaga uye pakupedzisira, zvichikanganisa saiti yako.
Tarisa Backlinks - Chengeta yako yese yekubatanidza data pasi peimwe denga nematuru edu ekushandisa.
Moz - yakanakisa-mu-kirasi SEO software yemamiriro ese ezvinhu, kubva kune yedu yese-mu-imwe SEO chikuva kune zvishandiso zveiyo SEO yemuno, bhizinesi SERP analytics, uye ine simba API.
mySEOTool - SEO Software Inoshandiswa nezviuru zveVagadziri veWebhu, SEO maAdvista nemaAgency kubata avo SEO vatengi.
Netpeak Checker - chishandiso chakawanda chekutsvagisa kwemazhinji SEO ongororo. Chishandiso chine yakasarudzika ficha iyo inobvumidza kuongorora vevanokwikwidza 'nzira yekusimudzira uye kutsvagisa backlinks mbiri yeako makwikwi' mawebhusaiti.
Nightwatch - SEO performance tracker uye analytics chishandiso
Ontolo - Yedu Yekubatanidza Kuvaka Zvishandiso yave imwe yeanonyanyo rumbidzwa kushambadzira kweinternet uye anobatanidza maturusi ekuvaka neiyo yepamusoro SEO uye yekubatanidza nyanzvi dzekuvaka kuti ive otomatiki uye inobatanidza kugona kwekutarisira
Posirank - Yedu yepuratifomu chikuva haisi chete yekumisikidza yega inofungidzirwa SEO sevhisi mune imwechete dhibhodhi - zvakare inotsigira yakazara otomatiki
Positionly ine simba, zvishandiso zvinoshandiswa nevashandisi zvinoita kuti kusimudzira webhusaiti yako chiitiko chinonakidza. Ongorora shanduko dzezuva nezuva, kuyera kuita kweSEO, uye nekuvandudza injini dzekutsvaga nekureruka.
Pro Chinzvimbo Tracker - Tora zvakanyanya kusvika parizvino, zviri nyore kuongorora ruzivo rwepamusoro pane ako mawebhusaiti, kuti ugare nhanho imwe pamberi pemakwikwi uye uwedzere purofiti yako.
RankAbove's Drive SEO Platform uye bhizinesi ungwaru software inoita kuti iwe ugochera zvakadzama mune SEO ruzivo rwatove pamaoko ako.
Chinzvimbo - Tarisa nzvimbo dzako dzewebhu webhusaiti uye ongorora vakwikwidzi vako mumainjini ekutsvaga mune chaiyo-nguva.
RankRanger - zuva nezuva mishumo uye nzwisiso kune yako webhusaiti traffic uye kushambadzira kubudirira.
RankScanner - Tarisa nzvimbo dzako dzemazwi makuru paGoogle neakaundi account.
Chinzvimbo Tracker naSpySERP - inopa vatangi veSEO uye nyanzvi zvakafanana nzira yemukati pane yavo yewebhu peji kuita pane akawanda mainjini ekutsvaga.
RankSonic - Teedzera shanduko dzezuva nezuva munzvimbo dzako, tora nzvimbo yepamberi analytics, spy kune vako vanokwikwidza uye nekuvandudza yako yekutsvaga injini masosi.
RankWatch - Chinzvimbo chekuongorora, backlink wachi, keyword mazano, chena kunyora, kuzivisa uye webhusaiti analyzer.
chikungubaya ine makumi matatu + maturusi ekukubatsira iwe kuwana mhedzisiro mune ese eaya epamhepo mabasa ekushambadzira.
Rio SEO ndiyo yakanakisa SEO chikuva chekuburitsa yepasi rese kutsvaga kubudirira paOrganic, Yemunharaunda Kutsvaga, Nharembozha neSocial Media yeTop Brands & maAgency.
Zvitsva zvekutsvaga - Kutsvaga kwedu uye zvemagariro analytics software Searchmetrics Suite ine data-based ongororo uye nehungwaru mhinduro inogonesa vashambadzi neSEOs kuongorora uye kugadzirisa zviitwa zvepasirese kana zvepasi rose SEO uye nekudaro kuwedzera mugove wemusika, mari nemari.
SEOCHECK.io - yemahara kiyi kiyi renji cheki iyo inobvumidza iwe kuteedzera kusvika makumi mashanu emazwi.
SEOReseller - yakazara chena-chitupa mhinduro yemasangano uye vanachipangamazano ekutsvaga kupa vese chikuva, kushuma, uye kunyangwe masevhisi kune avo vatengi.
Serpple - chishandiso chekutevera kiyi kiyi kuita muSERPs. Inosanganisira kukwikwidza kuteedzera uye kuzivisa.
Serpstat - yese-in-imwe SEO chikuva ine SEO Audits, Kukwikwidza Kwekutsvagisa, Backlink Kuongorora, Tsvagurudzo Yekutsvaga uye Chinzvimbo Chekutevera.
SERPtimizer - SEO chishandiso chekubatanidza, webhusaiti odhita uye kiyi yekutarisa.
SerpYou - yakachena uye nyore kushandisa interface uye zviri zviviri nekukurumidza uye chaiko.
SE chinzvimbo - yepasirese yekutsvaga injini yekutarisisa sisitimu inopa zvese zvakagadziriswa uye zvega-zvakagadziriswa mhinduro.
Semrush yakagadzirwa neSEO / SEM nyanzvi yeSEO / SEM nyanzvi. Isu tine ruzivo, hunyanzvi, uye dhata yekubatsira iwe kutora mapurojekiti ako padanho rinotevera. Ivo vanounganidza hombe huwandu hweSERP dhata yeanopfuura mamirioni zana mazwi akakosha uye mamirioni makumi mashanu enzvimbo.
SEO Kamera - Seo ngamera inoita ongororo izere yekutsvagisa injini pane yako, kana ako makwikwi mawebhusaiti.
SEO Chinzvimbo Monitor - Simbisa nzvimbo dzako, Tevera vakwikwidzi vako, uye utarise mashandiro eSEO neiyo yakazara yakazara renji yekutevera muindasitiri.
SeoSiteCheckup.com - Yekutsvaga Injini Kugonesa Yakagadzirwa Nyore. Mushandisi-ane hushamwari ongororo uye kuongorora kweako saiti saiti
SERP Scan - inoteedzera yako webhusaiti yekutsvaga injini chinzvimbo chemazwi akakosha kwauri.
SERPWoo - Wongorora ZVESE Zvepamusoro 20+ Zviwanikwa zveKo Keywords uye tora yambiro kana vakwikwidzi vachiwedzera yavo backlinks, masocial sign, masosi, uye zvimwe.
Pfupi Metrics - chishandiso chiri nyore kuyera yako yekubatanidza kuvaka nekukurumidza.
Siteoscope - keyword chinzvimbo, mukwikwidzi kuteedzera, yemagariro midhiya ongororo uye otomatiki kushuma.
SerpStat Keyword Suggestion Chishandiso - anozivikanwa mazwi akakosha uye avo akasiyana mafomu anoshandiswa nevanhu vari kutsvaga zvinonakidza zvigadzirwa, masevhisi kana ruzivo.
SpyFu inofumura yekushambadzira yakavanzika fomura yevakakwikwidza vako vanobudirira. Tsvaga chero domaini uye ona nzvimbo dzese dzavakaratidza paGoogle: rega kiyi kiyi yavakatenga paAdwords, ese organic chinzvimbo, uye ese kushambadzira kushambadzira mumakore apfuura matanhatu makore.
SyCara's SEO Platform inopa vashandisi indasitiri-inotungamira yekufambisa manejimendi manejimendi, masosi ekutsvaga enzvimbo, enhau enhau, uye ongororo yeSEO.
Tiny Ranker - Chengetedza yako masosi uye onpage SEO kuedza.
Topvisor - Dhijitari Kushambadzira Zvigadzirwa & Webhusaiti Ongororo Software. Edza izvi nekutevera kusvika pamazana maviri ezvinyorwa zvinyorwa zvemahara.
Unamo - Wana traffic yakawanda, natsiridza yako masosi uye siya makwikwi kumashure.
UpCity - Rega UpCity ibatsire bhizinesi rako diki kuwana mahara traffic kubva kunjini dzekutsvaga, midhiya enhau uye madhairekitori emuno.
WebMeUp Maturusi eSEO anosanganisa zviri nyore zvepamhepo SEO software neiyo data-hupfumi chete desktop desktop zvinogona kupa.
Chii CHangu SERP - WhatsMySerp yemahara SERP yekutarisa inobvumidza iwe kutarisa yepamusoro zana zana Google mitsva yekutsvaga kwemazwi mazhinji Unogona kuishandisa Kuongorora SERPs uye kutarisa yako webhusaiti chinzvimbo.
WooRank igiredhi rine simba pachiyero zana-chinongedzo chinomiririra kugona kwako kushambadzira kweinternet panguva yakapihwa. (Avhareji mamaki makumi mashanu. Kure kupfuura nhamba, iyo WooRank wongororo inokupa iwe yakakosha nzwisiso uye matipi ekukubatsira iwe kutora iyo yepamhepo nyika nedutu.
Wordtracker inopa Keyword Yekutsvagisa maturusi eSEO uye PPC, Rank Tracking uye Saiti Kuongorora maturusi.
Ongorora: Tine maakaunzi akabatana nemamwe emapuratifomu.
Tags: ZvakaruramaahrefsAsia seochiremera labsauthoritylabsbacklink kuongororabacklink kuwanikwabacklink sevhisibacklinkingBacklinksyakanakisa kiyi yekumisikidza chishandisoakanakisa online seo maturusibing varidzi vewebhukwedzakuvhenekwa seobrightedge kondakitatarisa keyword chinzvimbotarisa keyword chinzvimbotarisa masositarisa kutsvaga injini masositarisa seo chinzvimbohummingbirdcolibri seocolibri seo maturusikukwikwidza kutsvagisakuikudiyseoDhiragoni Metricsfirefox chinzvimbo chekiyemahara keyword chinzvimboyemahara keyword chinzvimbo chekutarisayemahara keyword chinzvimboyemahara keyword chinzvimbo chishandisoyemahara kiyi yekuteverayemahara chinzvimbo chekiyemahara chinzvimbo trackeryemahara seo chinzvimbo chekiginzametricsgoogle keyword yekushandisa yekushandisagoogle chinzvimbo trackergoogle seo chinzvimbo chekigoogle webmastersgshiftgshift labsgshiftlabsmaitiro ekutarisa kiyi yekuisa chinzvimboinbound Marketingkeyword manejimendikeyword management chishandisokeyword chinzvimbo trackerkeyword chinzvimbo chekuteverakeyword chirongwa manejakeyword chinzvimbo chekikeyword chinzvimbo chekutarisa chishandisokeyword chinzvimbo softwarekeyword chinzvimbo trackerkeyword chinzvimbo chekuteverakeyword chinzvimbo chekutevera softwarekeyword cheki chekikeyword chinzvimbo mushumokeyword chinzvimbo mishumokeyword chinzvimbo softwarekeyword chinzvimbo chishandiso yemaharakeyword chinzvimbo maturusikeyword chinzvimbo trackerkeyword rankings chishandisokeyword researchkeyword zano chishandisokeyword zvishandisokiyi yekuteverakiyi yekutevera softwarekiyi yekutevera yekushandisakeyword tracking zvishandisochinobatanidza-kuvakalinkodymajestichukuru seometa forensicstarisa injini dzekutsvagamoz chinzvimbo chekutarisanetpeak checkeronline chinzvimbo chekionline chinzvimbo trackeronline chinzvimbo chinzvimboontolopeji imwe seopeji renji trackerposirankpro chinzvimbo trackerchinzvimbo chekichinzvimbo cheki chromechinzvimbo chekutarisa chishandisochinzvimbo chekutarisa softwarechinzvimbo chekutarisa chishandisochinzvimbo kiyichinzvimbo softwarechinzvimbo trackerchinzvimbo tracker maharachinzvimbo tracker seochinzvimbo tracker softwarechinzvimbo tracker chishandisochinzvimbo chekuteverachinzvimbo chekutevera softwarechinzvimbo chekutevera chishandisozvishandiso zvekuteveracheki chepamusorochepamusoro chekichepamusoro mushumo softwarechepamusoro Softwarechinzvimbo maturusichepamusoro trackerchinzvimbonhandareranksonicchinowatchchikungubayaZvishandiso zveRavenraventoolsreal-time chinzvimbokubikario seose intelse chinzvimboyekutsvaga injini chinzvimbo trackeryekutsvaga injini rank trackeryekutsvaga injini yekutsvagayekutsvaga injini chinzvimbo softwareyekutsvaga injini rankings softwaretsvaga chinzvimbo chekisemrushiyo kuongororaseo asiaseo bhuku renzvimbo yekutarisaseo bhuku maturusiseo browserngameraseo keyword chinzvimbo chishandisoseo keyword trackerseo kiyi yekuteveraicho manejimendi chishandisoizvo zvishandiso zvekutarisaseo mapuratifomuseo chinzvimbo chekiseo chinzvimbo chekiseo chinzvimbo chekutarisaicho chinzvimbo mushumoseo chinzvimbo softwareicho chinzvimbo chinzvimboseo chinzvimbo maturusiseo chinzvimbo trackerseo chinzvimbo chekuteveraseo chinzvimbo chekiseo chinzvimbo chekiseo chinzvimbo mushumo softwareseo chinzvimbo softwareseo chinzvimbo chinzvimboseo chinzvimbo maturusiseo chinzvimbo trackerseo mushumo softwareseo kuzivisa softwareseo chishandiso chinzvimbo chekiseo zanaseo zvishandiso chinzvimbo chekiseo trackerseo kuteveraseo yekutevera softwareicho chekushandisa chekushandisaizvo zvishandiso zvekuteveraseobook chinzvimbo chekiseochecksecheck.ioseomozseomoz proseomoz pro zvishandisoseomoz maturusiserankingongororo yenyokaserp scanserpsserps.comserpstatserpyoushortlistkucompopespyfuspyserpchidiki chinzvimbomutariritevera maemailtrack kiyi kiyi masositrack keywordstwitter keyword chishandisounamoupcitywebhu chinzvimbo softwarewebmeupwebhusaiti chinzvimbo softwarewordtrackerYouTube keywords
Irwo runyorwa rwakanaka. Ingoenda kunoratidza kuti yakawanda sei ini ndichiri kufanira kudzidza nezve SEO!
Ndatenda! Yedu SEO zvinyorwa zvinofanirwa kukupa iwe zvaunoda.
Runyorwa rukuru, maita basa. Asi ini ndinofunga webceo inoshaikwa, yakanaka seti yepamhepo seo maturusi ekuongorora webhusaiti yako wozoigadziridza.
Hi Zac, ndakatarisa WebCEO uye iyo ipuratifomu yedesktop yeWindows. Takatarisa pamaturusi epamhepo pano. Ndatenda!
Ichokwadi musika wakazara - uye iyi runyorwa ingori pamusoro peiri iceberg! Kana iwe uchishuvira kuita yakafanana posvo asi yakanangana nematurusi eiyo SEO yemunharaunda saka ndokumbira utizivise - isu tichave tichifara kupa zvirimo uye kubatsira ne curation. Ndatenda Douglas
Hei, isu kuSERP Scan takangoburitsa renzvimbo yekutevera chimiro. Chero mukana wekusanganisira isu Douglas? Ndatenda!
Kuvandudzwa, kunoita senge mudziyo mukuru wezvekushandisa.
Ndatenda Michael! Ini ndazviwedzera kune iyo chinyorwa.
Kutenda nekusanganisa WebMeUp, Douglas!
Nenzira, isu tangowedzera iyo Social Media module kune WebMeUp. Nekudaro, mumwe anogona kuti isu hatisi ivo vechokwadi SEO software izvozvi. 😉
Jun 24, 2013 pa1: 01AM
Ini ndashandisa maturusi akati wandei kuteedzera masiteki evatengi vedu asi ndoda zano pane chishandiso chinogona kuteedzera masiteki emazwi asingagumi. Tinoda imwe ye e-commerce portal iyo ine makumi ezviuru emazwi akakosha kuteedzera.
Jun 24, 2013 pa8: 24AM
Vatengi vedu vanoshanda pahukuru ihwohwo vanoshandisa Conductor, @disqus_wFlYDncKKH: disqus. Haisi isingadhuri asi ine mamwe akanaka mapoka uye ekuzivisa ma module. Iwe unogona zvakare kutenga yako pachako chinongedzo chekutevera zvinyorwa - asi hazvisi zveavo vanopera moyo seinjini dzekutsvaga dzinoedza kuvharira masevhisi zvakanyanya sezvinobvira.
Jul 18, 2013 pa 10: 22 AM
Yakanaka SEO Roster yeTuru Douglas! WebMeUp yave imwe yeangu faves. Anoshamisika Musika Samurai haana kuita ipfupi runyorwa?
Jul 18, 2013 pa 11: 03 AM
LXR Musika ine runyorwa rurefu rwezvishandiso zvikuru zvakaitwa nyore kune varidzi vemabhizinesi madiki vari kutsvaga kuita yavo SEO
Jul 23, 2013 na3: 21 PM
Runyorwa rukuru! Vamwe vanga vasina kujaira uye ndinofanira kuzviedza. Kubva pane aya ndakashandisa Tsvagiridzo zvakanyanya, asi Cuutio anofanirwa kunge ari pachinyorwa, zvakare, ndinofunga (www.cuutio.com)
Aug 23, 2013 na3: 28 PM
Ini ndinofunga iwe unogona kutarisa pane chishandiso chedu - positionly.com. Tora iyo kuti utore uye wongorore wega 🙂 Ndine chokwadi chekuti ichasangana nemipimo yako.
Kunze kweizvozvo, ini ndinoda masaga akadai. Zvese zvinobatsira maturusi akaiswa pamwechete. Zvakanaka!
Aug 24, 2013 na6: 49 PM
Ndatenda Krystian! Yakawedzera iwe kune iyo runyorwa.
Jul 3, 2014 pa 7: 23 AM
Mhoroi apo! runyorwa rukuru iwe unogona zvakare kuyedza seo rank yekutarisa, ndakaida kusvika zvino..vachangoburitsa vhezheni itsva, iyo (ndinofunga) inotaridzika kunge inotyisa.
Jul 3, 2014 pa 9: 22 AM
Ndatenda! Yakawedzerwa kune iyo chinyorwa.
Jul 8, 2014 pa 10: 06 AM
Unogona here kutora tariso nekukurumidza pane yedu yepasi-kutyora mhinduro pa https://www.serpwoo.com/?
Tese tine maakaundi emahara uye akabhadharwa, pamwe nekupa SERP njere yekutevera pane akati wandei mazwi akakosha atinoteedzera kunhengo dzese.
Ndatenda nekutarisa uye ndinovimba kuzokwanisa kukubatsira nemhinduro yedu kana uchiida.
Jul 8, 2014 pa 11: 07 AM
Zvakanaka, tawedzera chishandiso chako pane izvo zvinyorwa.
Aug 15, 2014 na2: 01 PM
Mhoroi, zvinosuruvarisa kuti hazvina kuwanikwa mune runyorwa rwe http://rankinity.com. Ini ndinoshandisa chirongwa ichi nekuti chinzvimbo chekutevera munguva chaiyo.
Ndinovimba izvi zvinobatsira kwauri.
Aug 15, 2014 na4: 01 PM
Ndatenda! Ini ndazviwedzera kune iyo runyorwa!
Sep 26, 2014 na11: 01 PM
Yakakura post asi chandinofarira chishandiso maahrefs 🙂
Gumiguru 7, 2014 pa 4:26 AM
Tarisa uone Meta Forensics futi: http://metaforensics.io. Icho chishandiso chepamhepo chakafanana nemidziyo yedesktop 'Kuchemera Frog' uye 'Xenu Link Sleuth'. Chinhu chikuru chemusiyano ndechekuti icho zvakare chinopa yakadzama mishumo pawebhusaiti dhizaini uye inopa vashandisi ruzivo rwekuita nezve zvingangoita matambudziko pawebhusaiti yavo.
Yakanyanya Nice runyorwa rweSEO Zvishandiso ... handisati ndamboona kare..Ndatenda zvikuru Douglas Karr
Iwe unogona here kutarisa kushandira kwedu https://ranksonic.com uye wobva wawedzera pane yako runyorwa?
Isu tinokwanisa kupa yega yega Marketingtechblog kunyorera imwe dhisikaundi 🙂
Runyorwa rukuru! Zvinotyisa chaizvo neese maturusi, asi iwe wakanganwa RankScanner - uchiishandisa vhiki nevhiki, uye yakanaka kune chero bhizinesi, pamwe kunze kwemabhizinesi andinofungidzira. Ndakafunga kuti yaifanirwa kutaurwa.
Thanks Thomas, tazviwedzera.
Jun 8, 2015 pa10: 34AM
RankSonic inopa inoyevedza mhedzisiro mune ipfupi nguva furemu kune chero bhizinesi uye iwe unogona kuteedzera hombe nhamba yemazwi. Zvinonzwika zvakanaka kwandiri. Uye ndicho chibvumirano chewebsite yangu. Zvakare vane iyo LOT yezvinhu zvinotonhorera.
Jul 13, 2015 pa 2: 03 AM
Mhoro Douglas, isu tinoda kuve nechishandiso chedu pane ino runyorwa zvakare - http://www.siteoscope.com
Jul 15, 2015 na4: 55 PM
Yakawedzerwa! Inotaridzika sepakeji yakanaka.
Jul 16, 2015 pa 2: 10 AM
zviri chokwadi ndechekuti, kana iwe uchinge uchifarira mudashboard ini ndinogona kukufambisa kuburikidza nazvo 🙂
Gumiguru 5, 2015 pa 11:19 AM
Ruzivo Rukuru… .Rinobatsira zvikuru kune vanotanga… ..Thanks nekuipa iyo…
Gumiguru 8, 2015 pa 5:57 AM
Zvakanakisa, rega ndiwedzere runyorwa rwako nerusununguko seo odhita chishandiso. http://seocamel.com
Gumiguru 8, 2015 na8: 14 PM
Wakawedzera Larry! Ndatenda.
Zvita 29, 2015 na10: 58 PM
Inonakidza kwazvo, yaisaziva kuti maturusi mazhinji ari pamusika… Zvino ndichaenda rimwe nerimwe kuti ndione zvavanopa.
Chinyorwa chikuru Douglas! Iwe unofunga kuti iyo nhamba yezvishandiso zveSEO inoderera sezvo musika unozara? Zvinoita sekunge munhu wese ari kugadzira maturusi mazuva ano.
Mari yekupinda yekuvaka yako pachako chishandiso yakaderera zvakanyanya, saka handitende kudaro. Muchokwadi, tiri kushanda pedu izvozvi. Dambudziko, hazvo, nderekuti mazhinji emidziyo iyi haana kutevedzera maalgorithms saka ivo vari kupa REMAHARA ruzivo rwusingagone kuburitsa mhinduro kana kutokuvadza kambani kuvashandisa. Zano rangu raizove rekugara uchitsvaga hunyanzvi hweye SEO mubatsiri ane rakasimba kumashure.
Yakachengetedzwa kubhuku rangu rebhukimaki. Ndatenda. Asi ini ndine mubvunzo, kana iwe ukataura nezve google webmaster chishandiso, wadii wataura nezve bind WMT uye yandex WMT? ya, ndinoziva kuti kune vamwe vanhu google = yese Internet, asi kwete kune wese munhu. Ndinoziva vanhu vazhinji vanoshandisa bing seyakajairika yekutsvaga injini.
Olesya, ipfungwa inoshanda.
Inonyanya kubatsira runyorwa rweiyo maturusi. Ini ndashandisa dzinenge idzi.
Jul 26, 2016 pa 4: 16 AM
Vadiwa vese hama nehanzvadzi, mungade kutsanangura nezve baclink mune alexa.com?
iyi ndewebhu yangu:
pandinotarisa pane alexa, paine chete 2 webhusaiti inobatanidza kune yangu webhusaiti hofisi kunyangwe hazvo, ndine zvakawanda zvekugadzira account muhurukuro dzehurukuro. saka inguva yakareba sei inogona kubatanidza nehofisi yangu yesite. ndinokutendai nemutsa.
Abrar - AP Web Mhinduro
Gumiguru 3, 2016 pa 9:25 AM
Saka zvakawanda zvishandiso zvikuru. SEM Rush ndiyo yandinofarira kana zvasvika pakutengesa uye Majestic / Ahrefs ndiwo akanakisa ekubatanidza aggregaters. Imwe yandinonyatsoda ndeyeMozcast. Haisi tekinoroji chishandiso, asi zvakanaka kuti usimbiswe kana iwe uchiona kufamba kwakanyanya muSERPs uye iwe ukaona kuti hazvisi zvako uye pane chikuru chiitiko chiri kuitika - kunge paive nemavhiki mashoma apfuura
SEO yakakura kwazvo uye ini ndichangotanga kuve imwe. Chaizvoizvo pane zvakawanda zvekudzidza. Ndiri kunzwa kubatikana zvino, zvakawandisa kugaya. Wakatanga sei? Iwe unombonzwa kuda kuchema kuhope dzako nekuti hauna chokwadi chekuti uchabudirira kana kwete?
Tanga nekugadzira zvirinani kune vateereri vako. Kutsvaga inzira, kwete zano. Zano rako rinofanirwa kuve rekuenderera uchipa kukosha kune ako tarisiro uye vatengi.
Nov 8, 2017 pa9: 18AM
Ini ndinogona kukurudzira unamo, kare yaidaidzwa kumira. Inonyanya kubatsira uye yakachipa kwazvo ichienzaniswa nevakwikwidzi.
Jul 22, 2018 pa 6: 20 AM
Yakakura rondedzero Douglas, SERPtimizer iri rese-rakatenderedza seo chishandiso ine yakasarudzika yekubatanidza kutsvaga uye mukwikwidzi anoongorora. Chingave chinhu chekuwedzera?
Jul 22, 2018 pa 11: 25 AM
Thanks Erich, akawedzera!
Jul 24, 2018 pa 10: 32 AM
Iri ibhuku rakapenya- zvese zvishandiso zvikuru zvakanyorwa pamwechete!
Icho chishandiso Cocolyze.com chimwe chinhu chinogona kuwedzerwa? Icho chinongedzo chekutevera chishandiso ine yakanaka interface uye yakavimbika data. Zvingave zvinonakidza kuona izvo iwe kana vamwe munofunga nezvazvo futi.
Jul 31, 2019 pa 11: 01 AM
Ndakaona Moz asiri pachinyorwa…? Zvakare, ini ndinoshandisa yakabhadharwa vhezheni yeBuzzSumo yekutarisa backlinks.
Jul 31, 2019 na1: 30 PM
Wow, ndine hurombo ndasiya avo panze. Ndatenda Frank - ini ndinotora idzi dzigadziridzwe. Mapuratifomu maviri aya ave achinyanya kubatsira.
Kukadzi 2, 2021 na2: 16 PM
ini ndoda seo chishandiso pls nditungamire icho chishandiso chakanakisa
Kukadzi 2, 2021 na2: 26 PM
Mhoro Mazhar, izvo zvinoenderana chaizvo nezvauri kuyedza kuwana. Uri kuyedza kukwidziridza yako saiti ye organic chinzvimbo? Uri kuedza kukwikwidza pane yakabhadharwa kutsvaga? Uri kuedza kukurumidza yako saiti? Uri kuedza kuita kukwikwidza kutsvagisa? Ndezvipi zvinangwa zvako?
Kukadzi 8, 2021 na2: 47 PM
ndinoda kurongedza saiti yangu
Kurudziro yangu kwaizove kutanga nayo Google Search Console (mahara) kwaunogona kunyoresa saiti uye kuongorora chero nyaya, shandisa Mapeji akajekeswa kugadzirisa yako saiti mashandiro (mahara) ipapo iwe ungashuve kuita an SEO kuongorora, mushure meizvozvo iwe unofanirwa kuita yakanangana nemukwikwidzi kuongorora uye shanda pakugadzira yako peji zvemukati zviri nani kupfuura vako vakwikwidzi. Kune izvo, ini ndinoshandisa SEMrush.
Ndanga ndichishandisa ahrefs uye Moz Mahara SEO Zvishandiso uye ndinofunga idzo dzinofanirwa-kuve neSEO maturusi munhu wese anofanira kunge ari kuyedza. Ndatenda nechinyorwa chinoshamisa. Ini ndaizoda kuitora sezvo ini ndichifunga kuunza hub nyowani yeruzivo kune yedu webhusaiti ( Doodle Dhijitari ). Ndatenda!
Icho chaive chinyorwa chinodzidzisa.Kwemavhiki mashoma apfuura, ini ndanga ndichitsvaga yakakodzera SEO chishandiso chekutevera yangu SEOperformance Mazhinji amaturusi awakataura aive matsva kwandiri. Kutenda nekugovana zvinotyisa mazwi ekuteedzera maturu. Ini ndichangobva kushandisa chishandiso cheSERP chekutarisa, Serpple. Iwe unogona zvakare kuongorora chishandiso chekutarisa iro rakakosha dhatabhesi dhata. Uye zvakare, iwe unogona here kunyora chinyorwa chinotsanangura mabhenefiti ekushandisa SERP Checker chishandiso cheSEO mumazuva anotevera. Izvi zvinogona kubatsira vatengesi vedigital seni.
Feb 19, 2021 at 8:43 PM
Kutenda Rachael, ini ndawedzera Serpple kune iyo chinyorwa!
Tinotenda nekufunga kwako.
Vanenge vese uye munhu wese mune yako runyorwa. Asi ini ndinoda google chaicho chishandiso GWM. Imwe yeakanakisa. Zvakanakisa kwandiri
Icho chidiki, asi ini ndinofunga chiri kuvandudza!